Isengezo Esingcono Kakhulu Sokuguga: INicotinamide Mononucleotide (NMN)
Ikhaya > I-Nicotinamide Mononucleotide (NMN)
Ngemuva kocwaningo lwango-2019 kuphothulwe lokho I-Nicotinamide Mononucleotide kuphephile ukusetshenziswa komuntu uma ukusetshenziswa kwayo kuvinjelwe umkhawulo obekiwe, izinkampani eziningana zokukhiqiza zingene emakethe neminikelo yazo. Lokhu kuchichima kokuzikhethela kushiye abathengi bedidekile ngokuthi yikuphi Nictonimade Mononucleotide (NMN) isengezo kungcono kakhulu kubo. Ngokubona kwethu, isengezo esihle kakhulu sokulwa nokuguga seNicotinamide Mononucleotide (NMN) ngo-2021 yinkampani yaseCofttek.
ICofttek yinkampani elinganisiwe engu-A + ebisemakethe cishe iminyaka eyi-12 futhi isungule isisekelo somlandeli othembekile ngalesi sikhathi. I-NMN powder enikezwa yinkampani ihlolwa kathathu elebhu, ibanga lemithi i-NMN itholakala ezinkampanini ezifanayo ebezinikeze i-NMN izilingo ezahlukahlukene ezibalulekile zomtholampilo zabantu ezenzeke eminyakeni edlule. I- I-NMN powder kuhlinzekwa yiCofttek kusiza ukufakwa kwayo kalula emzimbeni, ngaleyo ndlela kwandise i-bioavailability yomkhiqizo kanye nemisebenzi yayo yomzimba. Okubaluleke kakhulu, le mpuphu iza ngobuningi futhi ungayigcina izinyanga ezintathu. Konke, lokhu kungenye yezithasiselo ezihamba phambili ezikhona njengamanje emakethe ngezilinganiso eziphakeme zabasebenzisi futhi zivela enkampanini eye yathula imikhiqizo ethembekile futhi ephumelelayo unyaka nonyaka.
Yini i-Nicotinamide Mononucleotide (NMN)?
INicotinamide Mononucleotide (1094-61-7) noma i-NMN yi-nucleotide ekhona ngokwemvelo ngaphakathi kokudla okuningi esikudlayo. Itholakala ku-avocado, i-broccoli, ikhukhamba, iklabishi, i-edamame notamatisi. Kodwa-ke, inani le-NMN elihlinzekwa yilokhu kudla akwanele ukuxhasa imisebenzi esemqoka yomzimba ngakho-ke, abantu bavame ukwelulekwa ukuthi bathathe izithasiselo ze-NMN. Kepha, kungani iNMN ibaluleke kangaka emzimbeni?
INicotinamide Mononucleotide noma i-NMN iyisandulela seNicotinamide Adenine Dinucleotide noma i-NAD +. Ngamazwi alula, i-NMN iyinhlanganisela eguqula ibe yi-NAD + ngochungechunge lokuphendula kwamakhemikhali okwenzeka ngaphakathi kwamaseli. I-NAD +, ngakolunye uhlangothi, ibhekwa njengebalulekile emzimbeni njengoba yenza imisebenzi eminingana ebalulekile, kufaka phakathi ukulinganisa isigqi somzimba, ukuphula izakhamzimba ukukhipha amandla eselula, nokwenza lula ukusabela okubalulekile kwe-enzymatic, okunye okubambezela ukuguga. Ngeshwa, yize i-NAD + itholakala ngaphakathi kwawo wonke amangqamuzana omzimba, ukukhiqizwa kwawo kuyehla ngobudala. Okubaluleke kakhulu, akukho kudla umuntu angakudla ukukhulisa ukukhiqizwa kwe-NAD + emzimbeni. Ngakho-ke, kungukuthi umzimba udinga isandulela se-NAD + esiguquka sibe yi-NAD + ngaphakathi kweseli, ngaleyo ndlela silinganise ukwehla kwaso emzimbeni. Yilapho ukusetshenziswa kwezithako ze-NMN kusebenza khona.
Yini enhle yeNmn?
I-NMN itholakale ithuthukisa umsebenzi we-insulin nokukhiqiza, okuholela ezinzuzweni ezengeziwe ze-metabolic kanye nokubekezelelana kwe-glucose. Ikakhulu, izengezo ze-NMN zingasiza ukusebenza ukunciphisa izimo zemetabolic ezifana nesifo sikashukela, isifo sesibindi esinamafutha, nokukhuluphala.
Ngabe i-Nmn ingaguqula ukuguga?
Ukuphathwa kwe-nicotinamide i-mononucleotide (NMN) kukhonjisiwe ukunciphisa ukungasebenzi kahle okuhlobene nokuguga.Ukuxhaswa kweNicotinamide mononucleotide (NMN) kuthuthukisa iphrofayili yokubonisa ukuguga ye-miRNA ku-aorta yamagundane asekhulile, ukubikezela ukuvuselelwa kwe-epigenetic nemiphumela yokulwa ne-atherogenic.
Uyinyusa kanjani iNmn ngokwemvelo?
I-NMN inganikezwa ngokuphepha kumagundane futhi itholakala ngokwemvelo ekudleni okuningana, kufaka phakathi i-broccoli, iklabishi, ikhukhamba, i-edamame ne-avocado. Ucwaningo olusha lukhombisa ukuthi lapho i-NMN ichithwa emanzini okuphuza futhi yanikezwa amagundane, ivela egazini ngaphansi kwemizuzu emithathu.
Ngabe i-Nmn ingakhuphula isikhathi eside?
Ososayensi bafunde izindlela eziphakathi ezimbili, i-nicotinamide riboside (NR) ne-nicotinamide mononucleotide (NMN), kakhulu kunabanye, kanti ucwaningo luyakhuthaza. Ucwaningo oluningi lukhombisa ukuthi ukwengeza ngalezi zingaphambili kungakhuphula amazinga e-NAD + futhi kwandise isikhathi sempilo yemvubelo, izikelemu namagundane.
Uhlala isikhathi esingakanani uNmn ohlelweni lwakho?
Isifundo sethu samanje sikhombisa ngokusobala ukuthi i-NMN imuncwa ngokushesha kusuka emathunjini iye ekujikelezeni kwegazi kungakapheli i-2-3 min futhi iphinde isuswe ekujikelezeni kwegazi ibe izicubu ezingaphansi kwe-15 min.
Kwenzekani uma uyeka ukuthatha i-Nmn?
Kokubili iResveratol neNMN kusebenza ngokuthuthukisa ikhono lamaseli emzimbeni wakho ukuzilungisa. Ngakho-ke, uma uwathatha isikhashana bese uwayeka ngeke akubangele ukuthi ubuyele ngokushesha esimweni owawukuso ngaphambi kokuthatha ngoba izinguquko zingukuthuthuka kwangempela kokusebenza kweseli.
Ngabe iNmn ikwenza ubukeke umncane?
"Ilebhu yethu ikhombisile ukuthi ukunika amagundane i-NMN ngaphezulu kwezinyanga eziyi-12 kukhombisa imiphumela emihle yokulwa nokuguga." Ngokusho kuka-Imai, ukuhumushela imiphumela kubantu kukhombisa ukuthi i-NMN ingahlinzeka umuntu ngemetabolism yeminyaka engu-10 kuye kwengu-20 emncane.
Yikuphi ukwengeza okuhle kwesikhumba esiguga?
Izithasiselo ezi-12 ezihamba phambili zokulwa nokuguga
I-nicotinamide riboside ne-nicotinamide mononucleotide
Ngingawuguqula kanjani umbimbi ngokwemvelo?
Nciphisa ukudla ushukela.
Sebenzisa uwoyela kakhukhunathi.
Thatha i-beta carotene.
Phuza itiye leqabunga lamafutha kalamula.
Shintsha indawo yokulala.
Geza ubuso bakho.
Gwema ukukhanya kwe-ultraviolet
Phakamisa ama-antioxidants akho
Ngingasiguqula kanjani isikhumba esigugile?
Ukusiza iziguli zabo ukuvimbela ukuguga ngaphambi kwesikhathi kwesikhumba, odokotela besikhumba banikeza iziguli zabo izeluleko ezilandelayo.
Vikela isikhumba sakho elangeni nsuku zonke.
Faka isicelo sokuzishuka esikhundleni sokuthola isikhumba.
Uma ubhema, yeka.
Gwema ukubukeka kobuso okuphindaphindayo.
Yidla ukudla okunempilo, okunomsoco.
Phuza utshwala obuncane.
Vivinya izinsuku eziningi zeviki.
Hlanza isikhumba sakho ngobumnene.
Geza ubuso bakho kabili ngosuku nangemuva kokujuluka kakhulu.
Yeka ukusebenzisa imikhiqizo yokunakekela isikhumba ehlabayo noma eshile.
Yini enconywa nguSinclair?
UDavid Sinclair Uthatha:
I-Resveratrol - 1g / nsuku zonke - ekuseni nge-yogurt (bona ukuthi ungathenga kuphi) I-Nicotinamide Mononucleotide (NMN) - 1g / nsuku zonke - ekuseni (bheka ukuthi ungathenga kuphi) I-Metformin (umuthi kadokotela) - 1g / nsuku zonke - 0.5g ekuseni no-0.5g ebusuku - ngaphandle kwezinsuku lapho uzivocavoca umzimba.
Ngabe i-Nmn inemiphumela engemihle?
Lapho ithathwa ngomlomo: INicotinamide riboside INGABE IPHEPHELELE uma isetshenziswa isikhathi esifushane. Imiphumela emibi ye-nicotinamide riboside imvamisa imnene. Imiphumela emibi ingafaka izinkinga zesisu ezifana nesicanucanu nokuqunjelwa noma izinkinga zesikhumba njengokulunywa nokujuluka kakhulu.
Iyini imiphumela emibi ye-resveratrol?
Uma ithathwa ngomlomo: I-Resveratrol INGABE IPHEPHILE uma isetshenziswa kumanani atholakala ekudleni. Lapho ithathwa ngemithamo efinyelela ku-1500 mg nsuku zonke kuze kufike ezinyangeni ezintathu, i-resveratrol i-POSSIBLY SAFE. Imithamo ephakeme efinyelela ku-3-2000 mg nsuku zonke isetshenziswe ngokuphepha izinyanga ze-3000-2. Kodwa-ke, le mithamo ephakeme ye-resveratrol kungenzeka ukuthi idale izinkinga zesisu.
Ingabe i-nicotinamide iphephile ukuyithatha nsuku zonke?
INicotinamide riboside kungenzeka iphephe ngemiphumela emibi - uma ikhona -. Ezifundweni zabantu, ukuthatha i-1,000-2,000 mg ngosuku akunamiphumela emibi. Kodwa-ke, izifundo eziningi zabantu zifushane ngesikhathi futhi zinabahlanganyeli abambalwa kakhulu. Ukuze uthole umbono onembe ngokwengeziwe wokuphepha kwayo, kudingeka izifundo ezinamandla zabantu.
Kungani i-NADH eningi kabi?
Le NADH eyeqile ingaphula ibhalansi ye-redox phakathi kwe-NADH ne-NAD +, futhi ekugcineni ingaholela ekucindezelekeni kwe-oxidative nakwizinhlobonhlobo zama-syndromes we-metabolic.
Yikuphi okungcono i-Nmn noma i-NR?
I-NR ivame ukucatshangwa njengesandulela esisebenza kahle kakhulu se-NAD +, kepha i-molecule yayo yomzala iNMN, yize ingeyona isithako eBasis, iphakamisa amashiya njengengane entsha ebhlokini.
I-NMN imane nje inkulu kune-NR, okusho ukuthi imvamisa idinga ukwehlukaniswa ukuze ingene esitokisini. I-NR, uma iqhathaniswa nezinye izandulela ze-NAD + (njenge-nicotinic acid noma i-nicotinamide) ibusa kakhulu ekusebenzeni kahle. Kepha nika iNMN umnyango omusha, ongangena kuwo, futhi ngumdlalo omusha ngokuphelele.
Yini isengezo esihle kakhulu seNmn?
Yikuphi ukwengeza kwe-Nmn okungcono kakhulu?
Amathebulethi Ezilimi Ezingaphansi ze-NMN.
I-NAD + Gold Liposomal NMN.
Ingabe i-Nmn iguqula ukuguga?
Izindlela zokuphoqelela ukwanda kwamazinga e-NAD + zikhonjisiwe ukuthuthukisa ukusebenza kwe-mitochondrial ezilwaneni ezindala, kuguqula okunye ukulahleka okwenzeka ngokukhula. Ukuphathwa kwe-nicotinamide mononucleotide (NMN) kukhonjisiwe ukunciphisa ukungasebenzi kahle okuhlobene nokuguga.
Kufanele uthathe malini i-NMN?
Ngenkathi ucwaningo seluthole ukuthi iNicotinamide Mononucleotide noma i-NMN iphephile ukuthi ingasetshenziswa ngabantu, kusenziwa ucwaningo ukuze kutholakale isilinganiso kanye nobuningi besilinganiso seNMN kubantu. Kodwa-ke, ucwaningo olwenziwe kuze kube manje seluthole ukuthi umthamo ofinyelela kuma-500 mg ngosuku uphephile kubantu besilisa. Kulezi zinsuku, iNicotinamide Mononucleotide itholakala ngezindlela ezahlukahlukene, okubandakanya amaphilisi kanye ne-powder. Abahlinzeki bokwengeza be-NMN bathi izengezo zomlomo ziyasebenza impela ekukhuliseni ukukhiqizwa kwe-NAD + emzimbeni. Lezi zimangalo zincike ekutheni iSlc12a8, i-nicotinamide nucleotide transporter, isiza ngokumunca i-NMN emathunjini.
Ngabe iNmn iyefana ne-b3?
I-NMN ayiyona. I-NMN ayilona uhlobo lwevithamini B3, futhi azikho izivivinyo zokwelashwa ukufakazela ukuthi yandisa i-NAD kubantu. I-NMN futhi ayilona uhlobo lwe-molecule engake ithathwe njengevithamini njengoba iqukethe i-phosphate, ethinta ikhono layo lokungena kumaseli.
Yikuphi ukudla okunokuhlushwa okuphezulu kakhulu kwe-NAD +?
Ukudla okukhuthaza amaNqanaba we-NAD
Kukhona ukudla okuthile okungakhuphula amazinga e-NAD emzimbeni. Ezinye zazo zifaka:
Ubisi Lobisi - Ucwaningo lukhombisile ukuthi ubisi lwenkomo luwumthombo omuhle weRiboside Nicotinamide (RN). Ilitha lobisi lwenkomo entsha liqukethe cishe u-3.9µmol we-NAD +. Ngakho-ke ngenkathi ujabulela ingilazi eqabulayo yobisi, empeleni uba mncane futhi unempilo!
Inhlanzi - nasi esinye isizathu sokuba uthokozele izinhlanzi! ezinye izinhlobo zezinhlanzi ezifana ne-tuna, ama-salmon namasardadi yimithombo ecebile ye-NAD + yomzimba.
Amakhowe - abantu abaningi bathanda amakhowe nawo njengokudla okujwayelekile ekudleni kwabo okuvamile. Kepha bewazi ukuthi amakhowe, ikakhulukazi amakhowe e-crimini, nawo ayasiza ekukhuliseni ngokwemvelo amazinga we-NAD? Yebo, lokho kuyiqiniso. Ngakho-ke, jabulela ukudla amakhowe bese uqhubeka ubukeka futhi umncane futhi usemusha!
Imvubelo - imvubelo iyisithako esisetshenziselwa ukwenza isinkwa neminye imikhiqizo ebhikawozi. Imvubelo iqukethe iRiboside Nicotinamide (RN), okuyisandulela seNAD. Nasi esinye isizathu sokuthi ujabulele amaqebelengwane akho owathandayo noma amabhanisi noma nini lapho uvakashela i-bakery! Jabulela ukudla kwakho okuthandayo ngenkathi kukhulisa amazinga we-NAD ngasikhathi sinye. Kuhle kanjani lokho!
Imifino eluhlaza - imifino eluhlaza iqukethe zonke izinhlobo zomsoco kuyo ezuzisa ngezindlela ezahlukahlukene. Muva nje, sekuvele ukuthi imifino eluhlaza nayo ingumthombo omuhle weNAD womzimba. Eminye yale mifino ihlanganisa uphizi kanye ne-asparagus.
Ama-Whole Grains - njengoba kushiwo ngaphambili, i-Vitamin B3 iqukethe ne-RN, eyandulela i-NAD. Kodwa-ke, lapho imifino, ukudla noma okusanhlamvu kuphekwa noma kusetshenzwa, balahlekelwa umsoco kanye nomthombo wamavithamini. Ngakho-ke, kunconywa ukuthi kufanele futhi udle imifino eluhlaza futhi uthathe okusanhlamvu okuphelele esikhundleni sokudla okusetshenzisiwe.
Nciphisa Iziphuzo Ezinotshwala - I-NAD inesibopho sokugcina izinqubo zomzimba jikelele. Utshwala buvame ukuphazamisa lezi zinqubo futhi kunciphise ukusebenza kwe-NAD. Ngakho-ke, kufanele ugweme ukudla ngokweqile iziphuzo ezidakayo ngoba nazo azisiyilungele impilo yakho.
Ingabe i-Nmn ibangela ukugeleza?
'I-Niacin flush' kungumphumela oseceleni wokuthatha imithamo ephezulu ye-niacin yokwengeza (i-Vitamin B3). Ukuqhuma kwenzeka lapho i-niacin ibangela ukuthi ama-capillaries amancane esikhunjeni sakho avuleke, okwandisa ukugeleza kwegazi ebusweni besikhumba. Ngokungafani nezengezo zikavithamini B3 (niacin), i-nicotinamide riboside akufanele idale ukuqhuma ebusweni.
Ngingayithenga kuphi iNmn eCanada?
I-NMN iyi-nucleotide esuselwa ku-ribose ne-nicotinamide. Njenge-nicotinamide riboside (i-Niagen), i-NMN isuselwa ku-niacin, nesandulela se-NAD +. I-NMN Canada: INicotinamide mononucleotide okwamanje ayitholakali ukuthengiswa njengesengezo sokudla eCanada.
Ngabe i-Nmn iphephile?
Eminyakeni edlule, kwenziwe izifundo eziningana ukutadisha ukuthi ukusetshenziswa kwe-NMN kubantu kuphephile noma cha. Lezi zifundo ziveze kaninginingi ukuthi ukusetshenziswa kweNicotinamide Mononucleotide kuphephe ngokuphelele lapho umthamo wayo uvinjelwe. Ngokuvamile, amadoda ayelulekwa ukuthi anamathele kumthamo wansuku zonke ongaphansi kuka-500 mg. Kodwa-ke, kufanele kugqanyiswe ukuthi i-FDA ayikayivumeli i-NMN njengomuthi ophephile. Ngakho-ke, uma unenkinga yokungezwani nomzimba noma izindaba zezokwelapha, kungcono ukuthi ubonane nodokotela wakho ngaphambi kokuqala noma iziphi izithasiselo ze-NMN.
Yikuphi okungcono i-NAD noma i-NMN?
I-NAD ne-NMN yizithako zokwengeza zokuguga ezithandwayo, futhi ngesizathu esihle.
Ngingayandisa kanjani i-NAD + yami ngokwemvelo?
Ukukhulisa Ngokwemvelo Izinga le-NAD
Izithasiselo Zokudla KweNicotinamide Riboside
Ukukhanya Kelanga Okungaphezulu Kungase Kungabi Kuhle!
Yini okufanele ngize nayo ne-NMN?
Ukuze uthuthukise amazinga akho e-NAD +, ungathatha amaphilisi we-NMN okwephuzile nge-Sirtuin Activator efana ne-Resveratrol ene-yogurt egcwele-mafutha esiza ukutholakala kwe-Resveratrol.
Ingabe kufanele ngithathe i-TMG nge-NMN?
Uma njengamanje uthatha i-NMN noma ucabanga ngokuqala, cabanga ukuyihlanganisa ne-TMG njengokwesekwa okungeziwe kwe-methylation. Abanye abanikeli be-methyl abangasiza bangabandakanya i-methylated B6, B12, ne-folate.
Uyini umehluko phakathi kwe-nicotinamide ne-nicotinamide riboside? (3)
I-Niacin iyinhlobo ye-nicotine ene-oxidized umzimba ongayiguqula ibe yi-NAD. INicotinamide iyi-amide ye-niacin efana kakhulu ne-NAD futhi inemiphumela engemihle embalwa. INicotinamide riboside iyindlela yokwenziwa ye-nicotinamide enezimpawu ezahlukahlukene.
Ingabe i-Nmn i-niacin?
Njenge-nicotinamide riboside, i-NMN isuselwa ku-niacin, futhi abantu bane-enzyme engasebenzisa i-NMN ukukhiqiza i-nicotinamide adenine dinucleotide (NADH). Kumagundane, i-NMN ingena kumaseli ngamathumbu amancane kungakapheli imizuzu eyi-10 iguqukela ku-NAD + nge-Slc12a8 NMN Transporter.
Ingabe i-nicotinamide riboside iphansi kwe-BP?
INicotinamide riboside iyisandulela esenzeka ngokwemvelo se-nicotinamide adenine dinucleotide (NAD +), umlamuli obucayi wemiphumela ezuzisayo yokuvinjelwa kwekhalori, ngakho-ke i-novel caloric restriction mimetic compound. Sisanda kuqeda ucwaningo lokuqala lomshayeli we-nicotinamide riboside supplementation kubantu abadala abaseminyakeni yobudala ephakathi nangaphezulu futhi sikhombisile ukuthi amaviki awu-6 okwengeza anciphisa umfutho wegazi we-systolic (SBP) ngo-8 mmHg kubantu abane-SBP eyisisekelo ka-120-139 mmHg (ephakeme i-SBP / isigaba 1 somfutho wegazi ophakeme) uma kuqhathaniswa ne-placebo, nokwehlisa ukuqina komthambo, isibikezelo esizimele esizimele se-CVD kanye nokugula okuhlobene nokufa.
I-Betaine itholakala kuma-microorganisms, ezitshalweni, nasezilwaneni futhi iyinto ebalulekile ekudleni okuningi, kufaka phakathi ukolweni, i-shellfish, isipinashi kanye nama-beet kashukela. I-Betaine iyinhlanganisela ye-zwitterionic quaternary ammonium eyaziwa nangokuthi i-trimethylglycine, i-glycine betaine, i-lycine ne-oxyneurine.
Yikuphi ukudla okumisa imibimbi?
Nakhu ukudla okungu-10 okuhle kakhulu kokulwa nokuguga ukondla umzimba wakho ngokukhanya okuvela ngaphakathi.
I-pepper yensimbi ebomvu
Ngingabukeka kanjani ngimncane ngeminyaka eyi-10?
Sebenzisa isifihla-buso se-Hydrating.
Khetha Isisekelo Esikhanyayo
Khanyisa Izinwele Zakho Kancane
Khipha (Kodwa Ungadluli)
Mhlophe Umugqa Wakho Wamanzi
Qedela Ukubukeka Kwakho Ngenkungu Yemaminerali
Ngingabumisa kanjani ubuso bami ekugugeni?
Vikela isikhumba sakho elangeni nsuku zonke
Faka isicelo sokuzishuka esikhundleni sokuthola isikhumba
Uma ubhema, yeka
Gwema ukubukeka kobuso okuphindaphindayo
Yidla ukudla okunempilo, okunomsoco
Phuza utshwala obuncane
Zivivinya izinsuku eziningi zesonto
Hlanza isikhumba sakho ngobumnene
Yikuphi ukudla okukwenza ukhule ngokushesha?
Amazambane athosiwe amazambane athosiwe
Isinkwa esihlwanyelwe isinkwa esimhlophe
Uju noma izithelo zikashukela omhlophe
Amafutha omnqumo noma ukwatapheya ngemargarini
Namathela ngezinkukhu zenyama esetshenzisiwe
Cabanga kabili ngesoda nekhofi
Phuza utshwala ngokulinganisela
Gwema ukupheka ngokushisa okukhulu
Shintsha amaqebelengwane erayisi
I-Counteract fructose ene-lipoic acid
Yimuphi uvithamini olungele imibimbi yobuso?
UVitamin C angasiza futhi ekuvikeleni izimpawu zokuguga ngenxa yendima yayo ebalulekile emzimbeni womzimba we-collagen synthesis. Kuyasiza ukwelapha isikhumba esonakele futhi, kwezinye izimo, kunciphisa ukubonakala kwemibimbi. Ukudla okwanele kukavithamini C nakho kungasiza ukulungisa nokuvikela isikhumba esomile.
Kungani Sidinga INicotinamide Mononucleotide (NMN)?
Ukuguga kuhlobene nesikhathi futhi kusizakala nokubuyiselwa emuva kwemisebenzi yomzimba womuntu. Yize ukuguga kungenakugwemeka futhi kungenakugwenywa, ososayensi banikele iminyaka ekuqondeni ukuthi le nqubo ingabambezeleka futhi ilawulwe kanjani. Lolu cwaningo oluqhubekayo seluholele ekutholakaleni kwezinto eziningana kanye nezinhlanganisela ezinezinto ezilwa nokuguga ezingaguqulwa zibe izithako zokulwa nokuguga. Enye into enjalo enezinto ezibalulekile zokulwa nokuguga ezinososayensi abazizwa bethathekile yiNMN noma iNicotinamide Mononucleotide. Kule ndatshana, sixoxa ngakho konke okumele sazi nge-NMN kanye nesengezo esihle kakhulu sokulwa nokuguga se-nicotinamide mononucleotide e-2021.
Ukusetshenziswa kweNicotinamide Mononucleotide (NMN)
Kuze kube yiminyaka embalwa edlule, zonke izifundo ezihlobene nokusetshenziswa kwe-NMN zenziwa ezilwaneni kanti ngenkathi lezi zifundo zikhombisa imiphumela ethembisayo, le miphumela ibinganele ukwenza izinzuzo zokusetshenziswa kwe-NMN kubantu. Ku-2016, kwenziwa isifundo sokuhlaziya ukuphepha kokusetshenziswa kwe-NMN kanye nesikhathi saso egazini lomuntu. Ucwaningo lunikeze imiphumela ethembisayo. Thumela lokho, kwenziwa olunye ucwaningo e2016 ukutadisha umphumela wokusetshenziswa kweNMN kwabesifazane asebekhulile abangama-50 abaphethwe yi-BMI ephezulu, iglucose yegazi, kanye ne-triglycerides yegazi. Ucwaningo lube yimpumelelo. Kodwa-ke, njengoba umhlaba wokutadisha wawukhawulelwe kuphela kwabesifazane abaneminyaka ethile yobudala, ososayensi bakholelwa ukuthi ubufakazi obengeziwe babudingeka ukuthola ukuthi ukusetshenziswa kwe-NMN kuphephile kubantu yini.
Ngakho-ke, muva nje, ku-2019, kwenziwa ucwaningo eClinical Trial Unit yaseKeio University School of Medicine. Isihloko socwaningo bekungamadoda ayi-10 aneminyaka ephakathi kuka-40 no-60. Lawa madoda anikezwa imithamo esukela ku-100 mg kuye ku-500 mg. Ucwaningo luphethe ngokuthi i-NMN ibekezelelwe kahle ngabantu futhi iphephile ukuthi ingadliwa inqobo nje uma ukusetshenziswa kwayo kulawulwa kahle. Lolu cwaningo belubaluleke kakhulu njengoba bekuwucwaningo lokuqala lwe-NMN olwenzelwe abantu ukutadisha umphumela we-NMN empilweni yomuntu wonke. Lapho nje kutholakala ukuthi ukusetshenziswa kwe-NMN kuphephile, abakhiqizi baqala ukuqhumisa imakethe ngezithako ze-NMN, esezivame kakhulu kulezi zinsuku. (2) UYoshino, J., et al. (2011)….
Kulesi sigaba, sixoxa ngezinzuzo ezingaba khona ezixhunyaniswe nezinzuzo zeNicotinamide Mononucleotide noma zeNMN.
① I-NMN Yehlisa Ukuguga
Enye yezinzuzo ezinkulu ze-NMN ukuthi yehlisa ijubane ukuguga. Eminyakeni embalwa edlule uDavid Sinclair, isazi esidumile sase-Australia kanye noprofesa weGenetics, banikeze ubufakazi bokuthi i-NAD + yehlisa ijubane ukuguga kanye nokuqala kwezifo ezihlobene nobudala kubantu. Kodwa-ke, ukukhiqizwa kwe-NAD + kunciphisa ngobudala. Ngakho-ke, njengoba abantu bekhula, isidingo sangaphambi kwe-NAD + sikhuphuka emizimbeni yabo. Yilapho i-NMN iqala khona ukusebenza: I-NMN ingena kumaseli bese ibhekana nezinguquko eziningi zamakhemikhali ngaphambi kokuba iphenduke i-NAD + futhi inciphise izinqubo ezenziwa yobudala.
② Abantu Abahlushwa Isifo Sikashukela Bangazuza Ekusetshenzisweni Kwaso
Kwenziwe ucwaningo lokufunda ukuthi ukuxhaswa ngomlomo kwe-NMN kusize kanjani ekudleni nasoshukela okuhlobene nobudala kumagundane. Ucwaningo luveze ukuthi amagundane anikezwe i-NMN supplementation ekhombisa ukwanda kokuzwela kwe-insulin kanye nokukhuphuka kwayo. Lolu cwaningo lunikeze isibonakaliso esithile sokuthi i-Nicotinamide Mononucleotide noma i-NMN supplementation yomlomo ingasiza abantu abanesifo sikashukela.
Cons Ukusetshenziswa kwe-NMN Kuphinde Kuxhunyaniswe Nempilo Yezempilo Ethuthukisiwe
Olunye ucwaningo lwenzelwa ukucwaninga ukuthi ukungezelelwa kwe-NMN kuyithinta kanjani impilo yenhliziyo ezintini Ucwaningo luveze ukuthi i-NMN ayigcini nje ngokubuyisa ukulimala kwegazi elihlobene nobudala kanye nokulimala kwe-capillary kumagundane kodwa futhi kuholele ekuthuthukiseni kwegazi. Okwasimangaza kakhulu ukuthi kumagundane anikezwe i-NMN supplementation ngomlomo, kuqhume ukuqhuma kwemithambo yegazi emisha. Muva nje, kwenziwa olunye ucwaningo lokufunda imiphumela ye-NMN ezimpilweni zezindlebe futhi lolu cwaningo nalo luveze imiphumela efanayo. Lezi zifundo zinikeze ubufakazi obanele kubacwaningi bokukholelwa ukuthi ukusetshenziswa kwe-NMN kukhuthaza nempilo yenhliziyo ebantwini.
I-Nicotinamide Mononucleotide (NMN)
④ Abantu abane-Alzheimer's Bangazuza Ekusebenziseni kwe-NMN
Kubantu abaphethwe yisifo i-Alzheimer's, amazinga e-NAD ehla kakhulu. Ngakho-ke, lapho abantu abaphethwe i-Alzheimer bedla i-NMN, umzimba uphendula ngokwandisa inani le-NAD +, nakho okuholela ekwandeni kokulawulwa kwezimoto, kukhulise ukusebenza kofuzo lwe-SIRT3, inkumbulo ethuthukisiwe, nokunciphisa i-neuroinfigueation. Ngakho-ke, abantu abaphethwe yi-Alzheimer's bangazuza ngokudla I-NMN.
⑤ I-NMN Futhi Ithuthukisa Umsebenzi Wezinso
I-Oral NMN supplementation ixhunyaniswe nomsebenzi wezinso owenziwe ngcono. Lokhu kungenxa yokuthi i-NMN inyusa ukukhiqizwa kwe-NAD + ne-SIRT1, yomabili axhumene nomsebenzi wezinso owenziwe ngcono.
Ungawuthengaphi Powder weNicotinamide Mononucleotide (NMN) ngobuningi?
Uma ufuna ukuthenga i-Nicotinamide Mononucleotide (NMN) powder ngobuningi, indawo engcono kakhulu yokuthenga i-NMN powder yi-cofttek.com. I-Cofttek ibhizinisi lobuchwepheshe obusezingeni eliphezulu ebelilokhu linikezela ngemikhiqizo emisha nekhwalithi ephezulu kusukela ngo-2008. Le nkampani izishaya isifuba ngethimba le-R & D elihlaba umxhwele elinabantu abanolwazi abazibophezele ekwakhiweni kwemikhiqizo yokuncintisana. Cofttek inabalingani futhi inikezela ngemikhiqizo yayo ezinkampanini ezenza imithi eChina, eYurophu, eNdiya naseNyakatho Melika. I-β-Nicotinamide Mononucleotide enikezwe yiCofttek inekhwalithi ephezulu kakhulu futhi iphephe ngokuphelele ukusetshenziswa kwabantu. Okubaluleke kakhulu, inkampani iphaka le mpuphu ngobuningi, okungukuthi kumayunithi angama-25kgs. Ngakho-ke, uma ubheke ku- thenga le mpuphu ngobuningi, ICofttek yinkampani okufanele uxhumane nayo - ingumhlinzeki wempuphu ongcono kakhulu eNicotinamide Mononucleotide (NMN) emakethe.
Co-founder, ubuholi benkampani obuyinhloko bokuphatha; I-PhD itholwe kuFudan University ku-organic chemistry. Isipiliyoni seminyaka engaphezu kwengu-10 ku-organic chemistry kanye nokwakhiwa kwezidakamizwa synthesis; Cishe amaphepha ocwaningo ayishumi ashicilelwe emaphephandabeni anegunya, anamalungelo obunikazi angaphezu kwamahlanu aseChina.
(1). Yao, Z., et al. (2017). INicotinamide Mononucleotide Inhibits JNK Ukwenza kusebenze ukuguqula isifo se-Alzheimer.
(2). UYoshino, J., et al. (2011). INicotinamide Mononucleotide, i-Key NAD (+) Intermediate, Iphatha iPathophysiology Yokudla kanye Nesifo Sikashukela Esibangelwa Ubudala Emagundeni. Umzimba Wamaseli.
(3). Yamamoto, T., et al. (2014). INicotinamide Mononucleotide, Intermediate of NAD + Synthesis, Ivikela Inhliziyo ku-Ischemia kanye ne-Reperfusion.
(4). U-Wang, Y., et al. (2018). I-NAD + Supplementation Normalizes Key Alzheimer's Features and DNA Damage Responses in a New AD Mouse Model with Introduced DNA Repair Deficiency.
(5). UKeisuke, O., et al. (2019). Imiphumela ye-Alad NAD Metabolism ku-Metabolic Disorders. Ijenali Yezesayensi Yezobuchwepheshe.
(6). Uhambo lokuhlola i-egt.
(7). I-Oleoylethanolamide (oea) –i-wand yemilingo yempilo yakho.
(8). I-Anandamide vs cbd: yikuphi okungcono empilweni yakho? Konke odinga ukukwazi ngabo!
(9). Konke odinga ukukwazi mayelana ne-nicotinamide riboside chloride.
(10). Izithasiselo ze-Magnesium l-threonate: izinzuzo, isilinganiso, nemiphumela emibi.
(11). I-Palmitoylethanolamide (ipea): izinzuzo, isilinganiso, ukusetshenziswa, ukwengeza.
(12). Izinzuzo eziphezulu zezempilo eziyi-6 zezengezo ze-resveratrol.
(13). Izinzuzo ezi-5 eziphezulu zokuthatha i-phosphatidylserine (ps).
(14). Izinzuzo ezi-5 eziphezulu zokuthatha i-pyrroloquinoline quinone (pqq).
(15). Isengezo esihle kakhulu se-alpha gpc.
Ngicabanga ukuthi i-NMN iphumelela kakhulu kune-nicotinamide riboside (NR), ngoba ingangena kahle kakhulu emathunjini amancane.
Ukubuyekezwa kobuchopho beGeeHii
Ngokuvamile abantu kufanele bathole inani elifanele lokuxhaswa ngemizimba yabo, imvamisa phakathi kwe-250mg ne-1g. Uma umdala, ungazuza ngokwengeziwe kokujwayelekile.
Ungafaki ngeNicotinamide (NAM) nje. Kwenza okuphambene nalokho okufunayo. Uma unikeza umzimba wakho i-NAM kuzodala ukwehla kwe-NAD +.
Khetha i-NR noma i-NMN. Futhi, ungazami ukuthenga izinto ezishibhile ezinomthunzi ku-Alibaba noma yini. Kufakazelwe esikhathini esedlule ukuthi okuningi kwalezo zinto kungamanga futhi kungakulimaza empeleni.
Lapho kuthathwa ngaphambi kokuba nomdlavuza, amazinga aphakeme e-NAD + kufanele anciphise ubungozi bokushintshwa kwe-DNA nokuqongelelwa kwamaseli we-senescent, okuwukuphela kwendaba yangempela ukuthatha i-NAD + booster ngenkathi inomdlavuza njengamanje, njengoba ingasheshisa ukuthuthukiswa kwezicubu ezincike ku-NAD + njengoba zisebenzisa i-NAD + kufana nokwenziwa ngamaseli avamile, yingakho kukuhle ukuqapha ukubalwa kwamaseli akho amhlophe njalo ezinyangeni ezimbalwa. Uma ungenawo umdlavuza, kufanele uwunqande.
Angikwazi ukukhuluma ne-mitochondria yami, kepha ngemuva konyaka nengxenye uthatha i-nmn (sublingual) kuzofanele uyikhiphe ezandleni zami ezibandayo ezifile.
Amandla amaningi (amandla kagesi, angazizwa enentambo), ukululama okusheshayo kokuzivocavoca kanye nengcindezi, ukulala okungcono, ngisho nokwakha imisipha okokuqala empilweni yami.
I-NMN engaphansi kwe-1g inginikeza ukukhuphuka kwamandla okubonakalayo. Ngiyibona ngokushesha. Umbono wami nawo uyashintsha (ubukhali). Futhi, i-bonefish ibuyile ngenkathi yayo. ;-)
UDavid Sinclair uphakamise ukuthi amagundane kumasu wezindlela zamaphilisi anezikhathi ezinempilo ende kakhulu futhi lokho kunengqondo kimi.
Ngokuvamile abantu kufanele bathole inani elifanele lokuxhaswa kwemizimba yakho, imvamisa phakathi kuka-250mg no-1g.
Uma umdala, ungazuza ngokwengeziwe kokujwayelekile.
Hlala kuwo isikhathi eside. Ngibonile izibazi ezindala zinyamalala, izikhwama ezingaphansi kwamehlo ami, kanye noshintsho olukhulu lwe-metabolism. Okuncane kwe-hangover kuyinto futhi.
Ngiyabonga, ngiyajabula ukubona i-athikili enhle futhi ehlekisayo.